गोरु काटेको निहुँमा हामीलाई जेलमा हाल्ने ? भन्दै ओली सरकारलाई लिम्बुवान नेताको चेतावनीः तिम्रा आन्द्राभुँडी छामिसकेका छौं ! झ्याम कि झ्याम हानाहान गर्ने हो भने सत्ता पल्टिन्छः कुमार लिङदेन « Light Nepal
गोरु काटेको निहुँमा हामीलाई जेलमा हाल्ने ? भन्दै ओली सरकारलाई लिम्बुवान नेताको चेतावनीः तिम्रा आन्द्राभुँडी छामिसकेका छौं ! झ्याम कि झ्याम हानाहान गर्ने हो भने सत्ता पल्टिन्छः कुमार लिङदेन
Published On : 21 April, 2018 7:38 pm
काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले शुक्रबार राजधानीको माइतीघर मण्डेलामा ‘पहिलो चरणको आन्दोलन’ अन्तरगत विरोध प्रदर्शन गर्‍यो । त्यहाँ लिम्बुवानी नेता कुमार लिङदेनले करिब १३ मिनेट चर्को भाषण गरे ।